Thermorecetas सम्पादकीय टीम - Thermomix साथ कुक ThermoRecines
Thermorecetas छ Thermomix संग बनेको व्यंजनहरु बारे अग्रणी ब्लग स्पेनमा र सामान्य रूपमा भान्छाको स्तरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक। यो खाना पकाउने सबै प्रेमीहरूलाई सामान्य रूपमा र विशेष गरी Thermomix प्रयोग गर्ने सबैका लागि दैनिक बैठक पोइन्ट हो।
वेब २०१० मा शुरू भयो र त्यस दिन देखि हामी प्रत्येक (वा धेरै) मौलिक व्यंजनहरू प्रकाशित गर्दछौं ताकि सबैजनाले आफ्ना भान्सामा बनाउन सकून्। हामीसँग सबै प्रकारका रेसिपीहरू छन्, सबै स्वादका लागि र सबै तहमा अनुकूलित, धेरै जटिल तयारीदेखि लिएर सरलहरू जुन 30० मिनेट भन्दा कममा गर्न सकिन्छ र धेरै आधारभूत खाना पकाउने ज्ञानको साथ।
साथै हामीले धेरै पुस्तकहरू सुरू गर्यौं जुन तपाईं यो सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीसँग छ अनयाका साथ २ पुस्तकहरू प्रकाशित भयो जुन एकदम राम्रो बिक्री भइरहेको छ र हामीले डिजिटल फर्म्याटमा धेरै किताबहरू पनि जारी गरेका छन पुस्तकको रूपमा एक्सप्रेस व्यंजनहरु minutes० मिनेट भन्दा कममा बनाउन। हामीले एनजीओको साथ पनि सहकार्य गरेका छौं एकजुटता पुस्तक बनाउँदै सबैभन्दा धेरै खाँचोमा परेकाहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन।
यदि तपाइँ सबै रेसिपीहरू हेर्न चाहानुहुन्छ, अब तपाइँ यसलाई सेक्शन प्रविष्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अत्यधिक-अर्डर व्यंजनहरु वा मा व्यंजनहरू विषयवस्तु द्वारा अर्डर गरियो। तपाईले बाँकी शीर्षकहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन वेबमा हामीले डील गरेका छौं हाम्रो खण्ड सेक्सन.
Thermorecetas मा देखा पर्ने सबै व्यंजनहरु हाम्रो कुकहरूले तयार गरेका छन्। तिनीहरू यस वेबसाइटको आत्मा हुन् र उनीहरूले बनाउने प्रत्येक भाँडामा कुकको रूपमा उनीहरूको क्षमता र अनुभव प्रदर्शन गर्छन्। यस खण्डमा हामी तपाईंलाई हाम्रो सम्पूर्ण सम्पादकीय टीमसँग परिचय गराउँदछौं ताकि तपाईं यसलाई चिन्न सक्नुहुनेछ र तपाइँ यस वेबसाइटमा घरमा महसुस गर्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाईं अब हामीसँग सामेल हुन चाहानुहुन्छ भने तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ यो फारम पूरा गर्दै र एकचोटि सके पछि हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडो सम्पर्क गर्नेछौं।
मेरो नाम इरेन हो, म म्याड्रिडमा जन्मेको थिएँ र म अनुवाद र अनुवादको डिग्री पनि लिएको छु (यद्यपि आज म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दुनियामा काम गर्छु)। हाल, म Thermorecetas.com को संयोजक हुँ, एक ब्लग जसको साथ मैले धेरै वर्षदेखि सहयोग गरिरहेको छु (यद्यपि म लामो समय अगाडि वफादार अनुयायी हुँ)। यहाँ मैले एउटा अद्भुत ठाउँ पत्ता लगाएको छु जसले मलाई महान व्यक्तिहरूसँग भेट्न र अनगिन्ती व्यंजनहरू र तरिकाहरू सिक्न अनुमति दिएको छ। खाना पकाउने मेरो उत्कटता तब आउँदछ जब म आमालाई खाना पकाउन सहयोग गरेको थिएँ। मेरो घरमा, संसारभरि सबै व्यञ्जनहरू सँधै तयार पारिन्छ, र यसले विदेशी यात्रा र पाक संसारसँग सम्बन्धित सबै चीजहरूप्रतिको मेरो ठूलो प्रेमको साथ आज मेरो ठूलो शौक बनाएको छ। वास्तवमा, मैले ब्लगि world संसारमा मेरो खाना पनी ब्लग सबोर इम्प्रेशन (www.saborimpresion.blogspot.com) बाट केहि वर्ष पहिले शुरू गरें। पछि मैले Thermomix भेटें, र मलाई थाहा थियो कि यो भान्छामा मेरो ठूलो सहयोगी हुनेछ। आज म यो बिना खाना पकाउन कल्पना गर्न सक्दिन।
मेरो नाम एसेन हो र मसँग विज्ञापन र सार्वजनिक सम्बन्धमा डिग्री छ। म खाना पकाउन, फोटोग्राफी गर्न र मेरा चार साना बच्चाहरूको आनन्द लिन चाहन्छु। डिसेम्बर २०११ मा मेरो परिवार र म परमा (इटाली) स moved्यौं। यहाँ म स्प्यानिश पकवान बनाउने क्रममा छु तर म यो देशबाट विशेष खाना पनि तयार गर्दछु, विशेष गरी पर्मा क्षेत्रबाट - परमेन्सहरूले "खाना उपत्यका" र इटालीको पेट्रोनोमिक पालना भन्ने गर्व गर्छन् ... -। इटालियनहरूले भने जस्तो म यो पाश्चात्य संस्कृति तपाईलाई पठाउँछु, अवश्य पनि हाम्रो थर्मोमिक्स वा बिम्बीसँग।
म १ 1976 inXNUMX मा अस्टुरियसमा जन्म भएको थिएँ। मैले कोरुआमा टेक्निकल बिजनेस र टुरिस्ट एक्टिविटी पढेको थिएँ र अब म भालेन्सिया प्रान्तमा पर्यटक सूचनाकर्ताको रूपमा काम गर्दैछु। म संसारको नागरिक हुँ र म यहाँ र मेरो सुटकेसमा फोटोहरू, स्मृति चिन्हहरू र रेसिपीहरू बोक्छु। म एउटा परिवारसँग सम्बन्धित छु जहाँ मजाको पलहरू राम्रो र नराम्रो टेबुल वरिपरि घुम्दछन्, त्यसैले म सानो भएदेखि मेरो जीवनको भान्छामा उपस्थित छ। तर कुनै श without्का बिना मेरो घरमा Thermomix को आगमन संग मेरो जोश बढयो। त्यसपछि ला कुचारा क्याप्रिकोसा (http://www.lacucharacaprichosa.com) ब्लगको निर्माण भयो। यो मेरो अलि महान प्रेम हो यदि म यो अलि परित्याग गरे पनि। म हाल Thermorecetas मा अद्भुत टीमको हिस्सा हुँ, जहाँ म एक सम्पादकको रूपमा सहयोग गर्दछु। यदि मेरो उत्कटता मेरो पेशाको हिस्सा हो र मेरो जुनो मेरो व्याकुलताको भाग हो भने म के गर्न चाहान्छु?
मैले १aking वर्षको उमेरदेखि बेकिंगको मेरो जिज्ञासु शौकबाट शुरू गरें, र त्यसबेलादेखि मैले पढ्न, अन्वेषण गर्न र अध्ययन गर्न छोडेको छैन। यो मेरो लागि पूर्ण समर्पण गर्नु मेरो लागि चुनौती थियो र मेरो भान्छामा एक थर्मोमिक्स पाउनको लागि वास्तविक खोज। यो प्रामाणिक खाना बनाउन धेरै सहज छ र यसले खाना पकाउने बारेमा मेरो ज्ञान विस्तार गर्दछ, मेरो लागि चुनौती र सहज र रचनात्मक व्यंजनहरू सिकाउन जारी राख्न सक्षम हुनु।
मलाई खाना पकाउन मन पर्छ। र लेख्नुहोस्। त्यसोभए खाना पकाउने ब्लगभन्दा उत्तम के हो? Thermorecetas मेरो काम र मेरो जोश को मिलाता है। यसैले म तपाईंसँग मेरो सबै भन्दा राम्रो व्यंजनहरू साझा गर्दछु, आवश्यक तत्वहरूको साथ बनाईएको हुँ, र उनीहरूलाई मनपर्दो बनाउन उत्साहका साथ।
मेरो नाम सिल्विया बेनिटो हो र एलेनासँगै मैले यो ब्लग २०१० मा सुरू गरें। खाना पकाउने र विशेष गरी Thermomix मेरो ठूलो जोश हो र यसले देखाउँदछ। म अलि अलि बढ्दै गएको छु, एक आत्म-सिकाएको तरिकामा सिक्दै; मेरो विशेषता मिठाई हो .... yum yum yum।
मेरो नाम एलेना हो र मेरो जोसका एक खाना पकाउँदैछ, तर विशेष गरी बेकिंग। मसँग Thermomix छ, यो जोश बढेको छ र यो अद्भुत मेसिन मेरो भान्छा मा केहि आवश्यक भएको छ।
ग्लासमा आधारित! केही वर्ष पहिले मलाई ग्यास्ट्रोनमिक संसार र यसमा प्रत्येक भान्सामा कसरी विकास भयो भन्ने कुरामा चासो राख्न थाल्छु। म, जसले केवल मेरो आहारको आधार बनाएर माइक्रोवेवमा राख्न कन्टेनरहरू खोले। प्रख्यात ब्लगरलाई धन्यबाद, मैले फ्रिज खोल्न र केहि पनि समातेर भन्दा पनि भान्साको प्रयोग गर्न शुरू गरें। केही वर्ष एक्लै काम गरिसकेपछि, कहिले काहिँ कहिलेकाँही घरेलु उपकरणहरू बाहेक, मैले जानाजानी भान्छाको रोबोट प्राप्त गर्‍यो जुनसँग म च्यानलमा प्रस्तुत गरेको धेरैजसो रेसिपीहरू विकास गर्दछु र जसको प्रयोगले मलाई दिनहुँ आश्चर्यचकित गर्दछ। यति धेरै कि म यसलाई साझेदारी गर्न चाहन्न। स्वागत छ! जे होस् मलाई सामान्य रूपमा खाना पकाउन मन पर्छ, तर केहि बर्षदेखि मैले खेलकुद र फिटनेसको आधारमा जीवनशैलीको शुरुआतका कारण खानको बानीमा केही परिवर्तन गरेको छु। मैले विकसित गरेको धेरैजसो रेसिपीहरू वास्तवमै हाम्रा प्यारामिटरहरू र आवश्यकताहरूको आधारमा खानेकुराको दर्शनमा आधारित हुन्छन्, एडिडिभहरू र उत्पादनहरू प्रदान गर्दछन् जुन कहिलेकाँही ठूलो ब्रान्डले हामीलाई बेच्दछ। यो अरूलाई राम्रोसँग केही सामग्रीहरू प्रतिस्थापन गरेर बनाउने विधिहरूको बारे हो जुन स्वस्थ प्राकृतिक प्राकृतिक मिठाईहरूको लागि चिनी हो जसमा स्टेभिया वा परिष्कृतको सट्टा सम्पूर्ण अन्नहरू हुन्छन्। अलि-अलि तपाईंले यसलाई देख्नुहुनेछ।
जोश र व्यवसाय को कुक। मैले धेरै वर्ष पहिले Thermomix को उपयोग गर्न शुरू गरिसके पछि हामी भान्छाको घरमा पूर्ण रूपमा अविभाज्य भएका छौं ... र आउने धेरै वर्षसम्म! Thermorecetas मा म मेरो सबै भन्दा राम्रो प्राप्त गर्न को लागी भान्सा मा शुरू गर्ने सबै मानिस लाई मद्दत गर्न सबै भन्दा राम्रो व्यंजनहरु प्रकाशित गर्दछ। के हामी पढ्छौं?